उपत्यकाको वातावरण बिहानको समयमा बढी हानिकारक !
काठमाडौं– मानव स्वास्थ्यका लागि काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण अन्य समयमा भन्दा बिहान बढी हानिकारक भएको विज्ञहरुले जनाएका छन् ।
काठमाडौं,पुस १३ -सरकारले गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका बिरामीलाई जीविकोपार्जनको लागि मासिक ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।
ल्मीको रेसुङ्गा अस्पत्तालमा दाँतको उपचार गर्न पुगेका व्यक्तिको मृत्यू भएको छ । मालिका गाउँपालिका ६ अर्जेका ५३ वर्षिय शिवलाल अर्यालको गिँजाको पिप निकाल्ने क्रममा मृत्यू भएको हो ।
श्री सुपा देउराली माताले सबैको कल्याण गरुन !
अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको पश्चिमाअंचल कै प्रसिद्द मन्दिर जय देउराली मातालाई सबैले एक एक share गरेर बिश्व सामु पुराउ !
कस्ता मानिस लामखुट्टेको रोजाइमा पर्छन् ? हेर्नुहोस
लामखुट्टेको टोकाइमा जोकोही पर्ने गर्छन् । कसैलाई लामखुट्टेले धेरै टोक्छ भने कसैलाई कम । अध्ययनहरुका अनुसार लामखुट्टेको रोजाइमा निश्चित वर्गका मानिस मात्र पर्ने गर्छन्, जसको केही विशेषता छ ।
अमेरिकाको चर्चित पत्रिका न्यूयोर्क टाइम्स लेख्छ -नेपाली डाक्टर सन्दुक विश्वकै दुर्लभ आखाँ डाक्टर
डाक्टरले काम गरिरहेको वेला हेरिरहंदा चमत्कार भए जस्तै लाग्छ, यो वाक्य पुलित्जर पुरष्कार विजेता न्यूयोर्क टाइम्सका चर्चित पत्रकार निकोलेस क्रिस्तोफले नेपालका प्रसिद्ध आंखा डाक्टर सन्दुक रुइतका वारेमा लेखेका हुन् ।
काठमाडौंको धुलो हटाउन १५ करोडमा ५ ब्रुमर
काठमाडौं,भदौं ३१ – काठमाडौं महानगरपालिकाकाले सडकको धुलो सफा गर्न प्रयोग गरिने ब्रुमर मेसिन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्क्रब टाइफसको संक्रमण बढ्दो / चितवन बढी प्रभावित
उपत्यकासहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा किटजन्य रोगका बिरामी बढ्न थालेका छन् । वर्षायाममा लामखुट्टे तथा अन्य किरा बढी सक्रिय हुने भएकाले किटजन्य रोगका बिरामी बढ्ने गर्छन् ।
दलदलमा फसेर गैँडा मर्‍यो
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कछुवानी पोष्ट नजिकै दलदलमा फसेर आइतबार एउटा गैँडा मरेको छ। दलदलमा फसेर अड्किएको अर्धवयस्क पोथी गैँडा आइतबार बिहान मरेको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत अभिनय पाठकले जानकारी दिए।
हरियो अलैचिका फाइदै फाइदा
आयुर्वेदका अनुसार हरियो अलैचीले शरीकको अपचलाई बढाएर तपाईको पाचन तन्त्रलाई सफा गर्छ । शरीरमा क्यास्ट्रोलको स्तर कम गर्छ ।
तपाईंको अनुहारमा हिँड्छन् हजारौं कीरा, जति धोएपनि जाँदैनन्
काठमाडौं, २३ भदौ -तपाईं आफ्नो अनुहारमा कत्तिको ध्यान दिनुहुन्छ ? कि अनुहारलाई फोहोर नै छोड्ने खालको हुनुहुन्छ ? तपाईं जस्तो खालको भएपनि तपाईंको अनुहारमा हजारौं कीरा सल्बलाइरहेका छन् ।
पिसाबबाट थाहा हुन्छ क्यान्सर, डाक्टरले दिए यस्तो सुझाव
काडमाडौं, २१ भदौ– स्वास्थ्यकर जीवनशैली नहुँदा मानिसहरुमा विभिन्न किसिमका रोगहरु लाग्ने गरेको छ । नेपालमा विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको कारण मानिसहरुको मृत्यु हुदै आएको छ ।
घरबाट खसेर मजदुरको मृत्यु
घर बनाउने क्रममा लडेर झापाको दमकमा सोमबार बिहान एक मजदुरको मृत्यु भएको छ। दमक–५ का हस्तबहादुर लिम्बूको घर बनाउने क्रममा झापा, कन्काई नगरपालिकास्थित सुरुङ्गा घर भएका गोपाल विश्वकर्माको लडेर मृत्यु भया ।